android ဖုန်းများအတွက် Epic လုံခြုံရေး app တစ်ခု | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Epic လုံခြုံရေး (သန့်ရှင်းဗိုင်းရပ်စ်) - Cleaner, Antivirus ကို
Epic လုံခြုံရေး (သန့်ရှင်းဗိုင်းရပ်စ်) - Cleaner, Antivirus ကို APK ကို
Epic လုံခြုံရေး (ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner, စူပါ Junk Cleaner, Booster, ဘက်ထရီချွေတာ, App ကို Lock ကို & ကို Message လုံခြုံရေး) သင့် privacy ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပ်များမှဘေးကင်းလုံခြုံသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်လွတ်လပ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေး application ဖြစ်ပါတယ်။
Epic လုံခြုံရေး - Cleaner သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်, ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner, အာကာသ, Booster, ဘက်ထရီချွေတာ - ပိုမြန်သင့်ဖုန်းနှင့် safer.Epic လုံခြုံရေးရဲ့ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များစေသည်:
ထိပ်တန်းအင်ဂျင် Antivirus ကို & နက်ရှိုင်းသော File ကို Scan ကို - TOP Antivirus ကို Lab ကအားဖြင့် Powered
စူပါ Cleaner - cache ကိုဖိုင်များ, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေစတာတွေအပါအဝင်အားလုံးအချည်းနှီးဖိုင်များ, Remove
ဖုန်းနံပါတ်အာနိသင်တိုးမြှင် & CPU ကို Cooler & ဘက်ထရီ Saver
ကို safe Browsing - အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
မက်ဆေ့ခ်ျကိုလုံခြုံရေး - သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်းကြားစာများ peeping ထံမှအခြားသူများကိုကာကွယ်မည်!
App ကို Locker - သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်
WIFI လုံခြုံရေး - အလားအလာကွန်ယက်ကိုသူလျှိုထောက်လှမ်း
သတိပေးချက် Cleaner - Block ကိုနှောင့်အယှက်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ
Epic လုံခြုံရေးအသုံးပြုနိုင်စွမ်းန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းမာမှုစနစ် cache ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်နှင့်ဆင်းရဲသောမိုဘိုင်းဘက်ထရီသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။
virus Cleaner & နက်ရှိုင်းသော File ကို Scan ကို - Antivirus ကို
ထိပ်တန်း Antivirus ကိုအင်ဂျင်၏ထောက်ပံ့မှုကိုအတူ - AVL, Epic လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံ 24 /7စောင့်ရှောက်ဖို့ကို real-time အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, malware နဲ့ spyware ကိုဖယ်ရှားနိုင်!
စူပါ Cleaner - အားလုံးအချည်းနှီးဖိုင်တွေတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါသဖြင့်တွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်
ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားအသုံးမကျဖိုင်တွေ (app ကို cache ကို, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, ကြော်ငြာမှာရှိတဲ့ Junk, အသုံးမပြုတဲ့အထုပ်), သငျသညျသိုလှောင်မှုတန်ချိန် Save!
ဖုန်းနံပါတ် Booster, ဘက်ထရီချွေတာခြင်း, CPU ကို Cooler
, ပေါ် မူတည်. app များကိုစားသုံးအာဏာအားလုံးကိုထောက်လှမ်းသူတို့ကို hibernate နှင့်ပင်သူတို့ကိုအေးခဲ။
အခြားသူများကိုရန်သင့်အကြောင်းကြားစာ preview ကိုပုန်းအောင်းနေဖြင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ပါ!
App ကို Locker
စသည်တို့ကို, သင့်ပုဂ္ဂလိက apps များထိုကဲ့သို့သောကို Message သော့ခတ်ခြင်းဖြင့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်ပါ
သတိပေးချက် Cleaner - notification & ကို Message ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာမှ
Wi-Fi သူလျှိုထောက်လှမ်း, သင်၏အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကာကွယ်ပါ!
Epic လုံခြုံရေး (သန့်ရှင်းဗိုင်းရပ်စ်) - Cleaner, Antivirus ကို
12.86 ကို MB
Wecool လုံခြုံရေး Lab က